चर्चित गायक पुष्कल शर्मालाई के भयो ? उपचार गराइरहेको दृश्य रातारात बन्यो भाइरल – Gazabkonews
चर्चित गायक पुष्कल शर्मालाई के भयो ? उपचार गराइरहेको दृश्य रातारात बन्यो भाइरल गायक पुस्कल शर्माको दाजु भाईले खेलेको दशैं गीत युटुबको ट्रेनिङमा सबैलाई रुवायो(भिडियो) सबैका लोकप्रिय गायककार हुन् पुस्कल शर्मा। उनले अहिले सम्म सयौ गीतहरुमा आज दीईसकेका छन् भने अभिनय पनि धेरै गीतहरुमा गरेका छन्।
त्यस्तै गीतमा टिकटक बाट भाईरल भएका कुशल बेलबासे र अन्जली अधिकारीको अभिनय रहेको छ। गीतमा परदेशिएको नेपालि दाजु भाईको पीडालाई समेटेर मार्मिक गित बनाईएको छ। यस कारण पनि यो गीत सबैको मन मुटुमा बस्न सफल भएको छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।